(Emelitere ikpeazụ On: 20/08/2021)
Ọ na-atụle otu n'ime ihe ndị kasị mma ntụrụndụ abụghị naanị na Puglia ma niile nke Italy nakwa dị ka Europe. Borgo Egnazia mkpa dị ka onye nke kasị mma na-yana idobe okirikiri ntụrụndụ na Europe. Borgo Egnazia uche amara ị na omenala ụkpụrụ ụlọ style ị ga-achọpụta gafee Puglia, nakwa dị ka ndị mara mma mma ụlọ, ọdọ mmiri, klọb golf, na ọbụna klọb ọrụ maka ụmụaka na-eto eto. Ga-esi Bari ma ọ bụ Brindisi ụgbọ okporo ígwè na mgbe aga Savelletri di Fasano, ewere sinik ụzọ ahụ niile beauties nke Puglia.
Italy nwere ọtụtụ ọmarịcha ebe ileta, mana Ala Amalfi bụ ọkacha mmasị n'etiti ndị Italy n'onwe ha. Na otu onye nke kacha mma na-yana idobe okirikiri ntụrụndụ na Europe bụ nri e. San Pietro, na ya 57 ụlọ na maa mma beach-n'akụkụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-obi ụtọ na ị na dị ka ukwuu dị ka mma nke region. Ị nwere ike n'akwụkwọ a ole na ole ngwa ngwa ụgbọ okporo ígwè agafe na-esi Amalfi, si Naples ma ọ bụ Salerno - na-enwe echiche n'ụzọ.
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ugwu mma kama esetị osimiri, onye nke kasị mma na-yana idobe okirikiri ntụrụndụ na Europe maka ị gaa na pụrụ ịbụ na Austria si Tyrolean Alps. Hotel Tannenhof obụrede mbụre egwu ugwu echiche, na ọ bụ a oké skai ichighaazu maka ndị na-ahọrọ a ubé ọzọ onwe ikuku. Ị nwere ike iru Ischgl mfe si Innsbruck, Zurich, ma ọ bụ Munich - n'ụgbọ okporo ígwè ga-ewe gị Landeck, mgbe nke ahụ ga-eme bụ obere ịchụpụ.
KỌR-Resort na mara mma n'ógbè Bavaria bụ n'etiti ndị kasị mma na-yana idobe okirikiri ntụrụndụ na Europe, ọkachasị ma a bịa n'inye ihe eji enyere ndụ aka dịka igwe eji ebuli mmiri na ime ụlọ kwadebere nke ọma.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-all-inclusive-resorts-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Ihe Nsonye yana Ihe Niile #ihe niile #ntụrụndụ #traveleurope europetravel ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Travel